မွနျမာပွညျက တရားဝငျလူသတျသမားမြား – Daily Feed MM
Admin_John | February 3, 2022 | Knowledge | No Comments
Tyreဟာသူ့ကိုအသုံးပွု​နခြေိနျမှာလူ့အသကျနဲ့သကျဆိုငျပါတယျ။ ဒီအတှကျ Tyre Manufacture ​တှဟော standard reference test tire (SRTT) အတိုငျးပွုလုပျပွီး test standard ပွညျ့မီ​ကွောငျးapproval ​တှရေယူကွပါတယျ။ အမြားသိကွတာက
“DOT” symbol ဖွဈပါတယျ။ Ture မှာ DOT နံပါတျနဲ့ Symbol ပါရငျစိတျခရြပါတယျ။ ဒါဟာ U.S. Department of Transportation (DOT) National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) tire safety standards ပွညျ့မီ​
ကွောငျးဖွဈပွီးဒါပါမှာ US မှာ​ရောငျးခခြှငျ့ရမှာဖွဈပါတယျ။ တာယာဝယျရငျ DOT standard (or) ECE certificate ရှိမရှိ​လလေ့ာပါ။ ECE က ECE stands for ‘Economic Commission for Europe’ ဖွဈပွီး Europe standard ပွညျ့မီပါမယျ။
တာယာ Quality ပွညျ့မီပွီး​နောကျထပျအ​ရေးကွီးတာက Date of Manufacture ပါ။ တာယာဟာထုတျလုပျတဲ့ခုနှဈက​နေ ၅နှဈအတှငျးအ​ကောငျးဆုံးဖွဈပါတယျ။ တာယာdate ​​လြော့တာနဲ့အမြှ​စြေး​လြော့ပါတယျ။ ဥပမာ အသုံးမြားတဲ့သူအ​နနေဲ့အိမျသုံးဆိုရငျ 2019
date ကိုဝယျပါရငျ 2021 date တာယာထကျ ​စြေး ၄၀% ခနျ့သကျသာပွီးစိတျခစြှာ ၃နှဈခနျ့သုံးနိုငျပါတယျ။ Date ​အောကိသှားရငျ..ဥပမာ ၂၀၁၇ dateTyre ​တှအေ​နနေဲ့ စှနျ့ပဈရုံလဲလှယျရုံသာရှိပါမယျ။
တာယာ Date ပွငျခွငျး
တာယာ Date ​လြော့တာကိုDate ပွငျပွနျရောငျးခွငျးဥပမာ တနျဖိုးကွီးတာယာတှမှော​တှရေ့တာမြားပါတယျနိုငျငံခွားသားမိတျ​ဆှတေဈ​ယောကျက​ပွောတယျ မငျးတို့ဆီတာယာတှကေ​စြေးဘာလို့ပေါ​နတောလဲ?
2018 Date tyre​တှနေိုငျငံခွားမှာ​စြေးက ​ပေါလှနျးလှပါတယျ။ Tyre တငျသှငျးစဥျ ဥပ​ဒအေကာအကှယျမရှိပါ။DATE ​ပျေါမှာဘာမှစညျးကွပျမှုမရှိပါ။ ဒီအတှကျdate ပွငျ​ရောငျးမဲ့သူတှအေတှကျအတားအစီးမရှိပါ။ အမှနျအကနျတငျသှငျးသူ​တှအေတှကျလဲယှဥျ​ရောငျးလို့ကိုမ
ရနိုငျပါ။Date ​လြော့တာကိုပွငျတာထကျဆိုးတာဟာ Date ​အောကျတဲ့တာယာတှကေိုပွငျတာပါ။ ဒါက​တော့အမှိုကျပုံထဲက​နအေသကျသှငျးပွငျးလူသတျတဲ့အဆငျ့ပါ။
တာယာ Date ပွငျတာအမြိုးသမီး​အမြားစုမသိနိုငျပါ။ ​နောကျပိုငျးကွညျ့တတျလာတယျ။ဒါ​ပမေဲ့​နောကျပိုငျးစကျပွငျ(စကျရုံ​တှကေပွငျလာခြိနျ) ခှဲလို့ခကျလာပါပွီ။
(ပုံမှာ​လလေ့ာပါ) ​တျော​တျောမြားမြားကခံရပါတယျ။ အဓိက​စြေးကွညျ့ကွတာပါ။ ​စြေး​တှပေါတျ​မေးတယျ။ တာယာ brand တူ Date တူရငျ​ပေါတဲ့​နရောလဲကွပါတယျ။ အသိ​တှထေဲကွုံရတာအမြားကွီးပါ။ ပုံပို့​ပေးတယျ။ အဈကို့ဆီက​စြေးမြားတယျ…ကိုယျကသိ​နပွေီ။
စီးပှား​ရေးမှာ မှနျကနျတဲ့​စြေးကှကျ​ဝစေုကိုမြှတစှာပွိုငျဆိုငျခွငျးသာပွုလုပျလိုပါတယျ။ ဆိုငျမှာလဲလာ​ရောငျးပါတယျ။ကုနျသညျက​ပွော​ရောငျးပါတယျ။ခှဲမရပါ။ ကြှနျ​​တျောလုံးဝမဝယျပါ။ ​မ​ရောငျးပါ။ စြေးကွီး/​စြေးကှာလို့မ​​ရောငျးရလဲတခွားရှိတာ​လေး​ရောငျးပွီသာ​နပေါ​တော့
Credit – ​အောငျမွငျမိုး Tyre78
Tyreဟာသူ့ကိုအသုံးပြု​နေချိန်မှာလူ့အသက်နဲ့သက်ဆိုင်ပါတယ်။ ဒီအတွက် Tyre Manufacture ​တွေဟာ standard reference test tire (SRTT) အတိုင်းပြုလုပ်ပြီး test standard ပြည့်မီ​ကြောင်းapproval ​တွေရယူကြပါတယ်။ အများသိကြတာက
“DOT” symbol ဖြစ်ပါတယ်။ Ture မှာ DOT နံပါတ်နဲ့ Symbol ပါရင်စိတ်ချရပါတယ်။ ဒါဟာ U.S. Department of Transportation (DOT) National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) tire safety standards ပြည့်မီ​
ကြောင်းဖြစ်ပြီးဒါပါမှာ US မှာ​ရောင်းချခွင့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ တာယာဝယ်ရင် DOT standard (or) ECE certificate ရှိမရှိ​လေ့လာပါ။ ECE က ECE stands for ‘Economic Commission for Europe’ ဖြစ်ပြီး Europe standard ပြည့်မီပါမယ်။
တာယာ Quality ပြည့်မီပြီး​နောက်ထပ်အ​ရေးကြီးတာက Date of Manufacture ပါ။ တာယာဟာထုတ်လုပ်တဲ့ခုနှစ်က​နေ ၅နှစ်အတွင်းအ​ကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ တာယာdate ​​လျော့တာနဲ့အမျှ​ဈေး​လျော့ပါတယ်။ ဥပမာ အသုံးများတဲ့သူအ​နေနဲ့အိမ်သုံးဆိုရင် 2019
date ကိုဝယ်ပါရင် 2021 date တာယာထက် ​ဈေး ၄၀% ခန့်သက်သာပြီးစိတ်ချစွာ ၃နှစ်ခန့်သုံးနိုင်ပါတယ်။ Date ​အောကိသွားရင်..ဥပမာ ၂၀၁၇ dateTyre ​တွေအ​နေနဲ့ စွန့်ပစ်ရုံလဲလှယ်ရုံသာရှိပါမယ်။
တာယာ Date ပြင်ခြင်း
တာယာ Date ​လျော့တာကိုDate ပြင်ပြန်ရောင်းခြင်းဥပမာ တန်ဖိုးကြီးတာယာတွေမှာ​တွေ့ရတာများပါတယ်နိုင်ငံခြားသားမိတ်​ဆွေတစ်​ယောက်က​ပြောတယ် မင်းတို့ဆီတာယာတွေက​ဈေးဘာလို့ပေါ​နေတာလဲ?
2018 Date tyre​တွေနိုင်ငံခြားမှာ​ဈေးက ​ပေါလွန်းလှပါတယ်။ Tyre တင်သွင်းစဉ် ဥပ​ဒေအကာအကွယ်မရှိပါ။DATE ​ပေါ်မှာဘာမှစည်းကြပ်မှုမရှိပါ။ ဒီအတွက်date ပြင်​ရောင်းမဲ့သူတွေအတွက်အတားအစီးမရှိပါ။ အမှန်အကန်တင်သွင်းသူ​တွေအတွက်လဲယှဉ်​ရောင်းလို့ကိုမ
ရနိုင်ပါ။Date ​လျော့တာကိုပြင်တာထက်ဆိုးတာဟာ Date ​အောက်တဲ့တာယာတွေကိုပြင်တာပါ။ ဒါက​တော့အမှိုက်ပုံထဲက​နေအသက်သွင်းပြင်းလူသတ်တဲ့အဆင့်ပါ။
တာယာ Date ပြင်တာအမျိုးသမီး​အများစုမသိနိုင်ပါ။ ​နောက်ပိုင်းကြည့်တတ်လာတယ်။ဒါ​ပေမဲ့​နောက်ပိုင်းစက်ပြင်(စက်ရုံ​တွေကပြင်လာချိန်) ခွဲလို့ခက်လာပါပြီ။
(ပုံမှာ​လေ့လာပါ) ​တော်​တော်များများကခံရပါတယ်။ အဓိက​ဈေးကြည့်ကြတာပါ။ ​ဈေး​တွေပါတ်​မေးတယ်။ တာယာ brand တူ Date တူရင်​ပေါတဲ့​နေရာလဲကြပါတယ်။ အသိ​တွေထဲကြုံရတာအများကြီးပါ။ ပုံပို့​ပေးတယ်။ အစ်ကို့ဆီက​ဈေးများတယ်…ကိုယ်ကသိ​နေပြီ။
စီးပွား​ရေးမှာ မှန်ကန်တဲ့​ဈေးကွက်​ဝေစုကိုမျှတစွာပြိုင်ဆိုင်ခြင်းသာပြုလုပ်လိုပါတယ်။ ဆိုင်မှာလဲလာ​ရောင်းပါတယ်။ကုန်သည်က​ပြော​ရောင်းပါတယ်။ခွဲမရပါ။ ကျွန်​​တော်လုံးဝမဝယ်ပါ။ ​မ​ရောင်းပါ။ ဈေးကြီး/​ဈေးကွာလို့မ​​ရောင်းရလဲတခြားရှိတာ​လေး​ရောင်းပြီသာ​နေပါ​တော့
Credit – ​အောင်မြင်မိုး Tyre78